လာပြန်ပြီ မြန်မာကျပ်ငွေကို ပြဲနေလို့ မသုံးရဘူးပြောတဲဘ ချောက်/ဆိပ်ဖြူ အနော်ရထာ တံတာ ဂိတ် တဲ့(ရုပ်သံ)ဲ့ - CeleLove
လာပြန်ပြီ မြန်မာကျပ်ငွေကို ပြဲနေလို့ မသုံးရဘူးပြောတဲဘ ချောက်/ဆိပ်ဖြူ အနော်ရထာ တံတာ ဂိတ် တဲ့(ရုပ်သံ)ဲ့
May 12, 2019 Cele Love Up To Date News 0
အစက ဒီ video မရိုက်ဘူးနေခဲ့တာ ကားကို ဒီထဲမှာပါတဲ့ အကျီင်္အမဲနဲ့ အမက အုတ်ခဲနဲ့ ထုမယ်လုပ်တယ် အ့ဒါကြောင့် ဒီ video လေးရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် …. ။
ကျတော်တို့ကားက မနက် ၁၀:၃၀ ဝန်းကျင်က ချောက် ဆိပ်ဖြူ အနော်ရထာတံတား ဂိတ်ကိုဖြတ်တယ် တံတားကြေး ၁၆၅၀၀ ပေးတယ် ဂိတ်တာဝန်ကျသူတွေက ပိုက်ဆံကိုစစ်ယူတယ်(အစုတ်အပြဲပါမပါ) သူတိုစစ်ပီးလို့ရပီဆိုမှ ကျတော်မောင်းထွက်ခဲ့တယ် …. ။
ညနေ ၃၀:၃၀ဝန်ကျင်လောက်ပြန်လာတယ် အ့ဒီမှာစတာပဲ မနက်က ပေးသွားတဲ့ထဲမှ ပိုက်ဆံ ၁၀၀၀ ပြဲနေလို့ လဲပေးပါတဲ့ ကျတော်လဲမလဲနိုင်ဘူးပြောလိုက်တယ် သူတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ပီးလို့ ရပီဆိုမှ ကျတော် မောင်းခဲ့တာ ညနေပြန်လာတော့ အပြဲပါတယ် လဲပေးပါဆိုတော့ ကျတော်က ဘယ်လိုယုံကြည်ရတော့မလဲ အ့ဒါနဲ့ ကျတော်လဲမပေးနိုင်ဘူးဆိုပီးအခုဖြတ်မဲ့ ခါလီကြေး ၂၀၀၀ ပေးတယ် မယူနိုင်ဘူးတဲ့ မနက်က ပိုတ်ဆံလဲမပေးရင် မဖြတ်နဲ့ရပ်ထားတဲ့ ကျတော်က အချိန်ကြာလို့ အမတို့ ကျတော် ဂိတ်ကြေးပေးတယ် အမတို့မယူတာနော် မယူရင် မောင်တံဘေး လွတ်တဲ့နေရာက ဖြတ်သွားမယ်လုပ်တယ် အ့ဒါကို အကျီင်္အမဲနဲ့ အမက မနက်က ၁၀၀၀ လဲမပေးရင် အခုဂိတ်ကြေးလဲမယူဘူး ဖြတ်လဲမဖြတ်ရဘူးဆိုပီ အုတ်ခဲနဲ့ ကားကိုထုမယ်လုပ်ပါတယ် ….. ။
အမ ကားမှန်ကွဲရင်တော့ ပြန်ရော်ပေးရမယ်လို့ပြောတော့ ရော်နိုင်တယ် စောက်ဂရုမစိုက်ဘူးတဲ့ ပိုက်ဆံ ၁၀၀၀ က မများပါဘူး ဒါပေမဲ့ တခါလဲမဟုတ်တော့ဘူး တော်တော်များနေပီ အ့ဒီ ချောက် ဆိပ်ဖြူအနော်ရထာတံတားဂိတ် ကျတော်တို့ပေးတဲ့ထဲမှ အစုတ်အပြဲပါရင် ချက်ချင်းလဲခိုင်းလဲပေးပါတယ် ခုကတော့တော်တော်များနေပီ ….. ။
Crd _ngwe phyo htet
လာပွနျပွီ မွနျမာကပျြငှကေို ပွဲနလေို့ မသုံးရဘူးပွောတဲဘ ခြောကျ/ဆိပျဖွူ အနျောရထာ တံတာ ဂိတျ တဲ့(ရုပျသံ)ဲ့
အစက ဒီ video မရိုကျဘူးနခေဲ့တာ ကားကို ဒီထဲမှာပါတဲ့ အကြီင်ျအမဲနဲ့ အမက အုတျခဲနဲ့ ထုမယျလုပျတယျ အ့ဒါကွောငျ့ ဒီ video လေးရိုကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ …. ။
ကတြျောတို့ကားက မနကျ ၁၀:၃၀ ဝနျးကငျြက ခြောကျ ဆိပျဖွူ အနျောရထာတံတား ဂိတျကိုဖွတျတယျ တံတားကွေး ၁၆၅၀၀ ပေးတယျ ဂိတျတာဝနျကသြူတှကေ ပိုကျဆံကိုစဈယူတယျ(အစုတျအပွဲပါမပါ) သူတိုစဈပီးလို့ရပီဆိုမှ ကတြျောမောငျးထှကျခဲ့တယျ …. ။
ညနေ ၃၀:၃ဝဝနျကငျြလောကျပွနျလာတယျ အ့ဒီမှာစတာပဲ မနကျက ပေးသှားတဲ့ထဲမှ ပိုကျဆံ ၁၀၀၀ ပွဲနလေို့ လဲပေးပါတဲ့ ကတြျောလဲမလဲနိုငျဘူးပွောလိုကျတယျ သူတို့ကိုယျတိုငျစဈပီးလို့ ရပီဆိုမှ ကတြျော မောငျးခဲ့တာ ညနပွေနျလာတော့ အပွဲပါတယျ လဲပေးပါဆိုတော့ ကတြျောက ဘယျလိုယုံကွညျရတော့မလဲ အ့ဒါနဲ့ ကတြျောလဲမပေးနိုငျဘူးဆိုပီးအခုဖွတျမဲ့ ခါလီကွေး ၂၀၀၀ ပေးတယျ မယူနိုငျဘူးတဲ့ မနကျက ပိုတျဆံလဲမပေးရငျ မဖွတျနဲ့ရပျထားတဲ့ ကတြျောက အခြိနျကွာလို့ အမတို့ ကတြျော ဂိတျကွေးပေးတယျ အမတို့မယူတာနျော မယူရငျ မောငျတံဘေး လှတျတဲ့နရောက ဖွတျသှားမယျလုပျတယျ အ့ဒါကို အကြီင်ျအမဲနဲ့ အမက မနကျက ၁၀၀၀ လဲမပေးရငျ အခုဂိတျကွေးလဲမယူဘူး ဖွတျလဲမဖွတျရဘူးဆိုပီ အုတျခဲနဲ့ ကားကိုထုမယျလုပျပါတယျ ….. ။
အမ ကားမှနျကှဲရငျတော့ ပွနျရျောပေးရမယျလို့ပွောတော့ ရျောနိုငျတယျ စောကျဂရုမစိုကျဘူးတဲ့ ပိုကျဆံ ၁၀၀၀ က မမြားပါဘူး ဒါပမေဲ့ တခါလဲမဟုတျတော့ဘူး တျောတျောမြားနပေီ အ့ဒီ ခြောကျ ဆိပျဖွူအနျောရထာတံတားဂိတျ ကတြျောတို့ပေးတဲ့ထဲမှ အစုတျအပွဲပါရငျ ခကျြခငျြးလဲခိုငျးလဲပေးပါတယျ ခုကတော့တျောတျောမြားနပေီ ….. ။
ခေါင်းဖြတ်သတ်၊အလောင်းဖျောက်၊မြေမြှုပ် ပြီး မှ ကိုယ်တိုင် လာရောက်ဖြောင့်ချက်ပေးပြီးအဖမ်းခံ …
အပူချိန်ဆက်လက် မြင့်တက်နေပြီး (၄) ရက်အတွင်း အပူချိန် ပြန်ကျမည်ဟု ဒေါက်တာထွန်းလွင်ခန့်မှန်း